Muqaal:Guurso Gabadhan Quruxda Badan oo Hel 315-kun oo Dolar oo Fara Saar Ah | Baahin Media
Muqaal:Guurso Gabadhan Quruxda Badan oo Hel 315-kun oo Dolar oo Fara Saar Ah
Go’aan yaab badan oo riyo dhab ah u noqon kara dhalinyaro fara badan oo ku nool daafah kala duwan ee dunida, milyaneer reer Thailand ah oo soo bandhigay gabadhiisa sida wanaagsan ugu hadashada Ingiriiska iyo lacago ka badan $300,000(Saddex boqol oo kun oo dolar) ninka ay gabadhiisu xulato jinsiyadda uu doono ha wato dal kasta ha ka soo jeedo, waa sida ay qortay jariidada Daily Mail.
Warbaahinta bulshada ayaa la isla dhex maryay warkan iyo in milyaneerka reer Thailand ee Aron Rodithong uu diyaar u yahay in uu siiyo ninka guursada gabadhiisa Karnasiita ee 26 jir ah inuu siin doono lacag u dhiganta 315-kun oo dolar isla markaana milkiyadeeda dhulka uu magaciisa ku qori doono, una dhiibi doono shaqada uu hadda isgu hayo.
Milyaneerkan 58 jirka ah ayaa waxa uu leeyahay beer weyn oo aad u miro badan oo qiimaheeda lagu qiyaaso malaayiin doolar, waxey ku taalla gobolka Tashoobihoon ee koonfurta Thailand, beeraha nooceeda ah ee gobolka waa tan ugu wanaagsan.
Milayneerkan ayaa ku khasbanaaday in uu hago mustaqbalka gabadhiisa, si ay nin wanaagsan u hesho, laakiin caadada Thailand ka jirta ninku isagaa meher siiya gabadha uu mustaqbalka ka leeyahay ee ooridiisa noqoneysa, waa sida uu xaalku yahay, dalkeenna Soomaaliya, waana dhaqan ka duwan caadada India ee dumarku ay meherka bixiyaan.
Karnasita aabbaheed waxey ka taageertaa maamulka howlaha qoyska, waxey taqaanna luqadaha Shiinaha iyo Ingiriiska oo ay si wanaagsan ugu hadasho oo lagu daray luqadda waddankeeda Thailand.
Aabahan milyaneerka ah ayaa sheegay in ninku jinsiyadda uu rabo uu ka soo jeedi karo, waxa looga baahan yahayna ay tahay inuu si waanaagsan u shaqeeyo kuna dadaalo sidii uu u farxadgelin lahaa gabadhiisa.
Waxa uu yiri: “Waxaan doonayaa nin gacansigaysa gacanta ku qabta oo ka shaqeeya sidii uu ku bulaali lahaa.. ma doonayo qof shahoodo jaamacadeed oo darajada koowaad, mastres degree ama Ph.D haysta.”
Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay, waxaa doonayaa nin dadaal badan oo si hagar la’aan ah ku shaqeeya.
Iyadoo ay jiraan inuu leeyahay caruur kale oo rag ah oo uu dhalay, ayaa waxa uu sheegay in gacansigiisa uu gacanta ka gelin doono ninka mustaqbalka guursan doona gabadhiisa shaqadiisa oo dhanna uu isaga ku wareejin doono.
Karnasita waxey sheegtay in bandhigga aabaheed uu ragga u soo bandhigay ay ka ogaatay gabar saaxiibteed ah oo u sheegtay, waxey tilmaantay in ninka guursan doona lacagta uu aabaheed siiyo sidii uu ku sii haysan lahaa ay ku adkaan doonto maadama ay dooneyso in qalliin is qurxin ah ay ku soo sameyso Kuuriya.
Waxeyna carrabka ku adkeysay iney doonayso in jacel oo wanaagsan, qoyskeeduna ay la dhacsan yihiin.